Madaxweyne Siilanyo oo Xubno Cusub u Magacaaby Gudida Sare ee Jaamacada Hargaysa – Saraar Media
Home›All War›Madaxweyne Siilanyo oo Xubno Cusub u Magacaaby Gudida Sare ee Jaamacada Hargaysa
Warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somaliland ayaa lagu sheegay xubnaha cusub ee madaxweyne Siilaanyo u magacaabay guddida sare ee jaamacada waxaanu warsaxaafadeedkaasi u dhignaa sidan :-
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu digreeto Madaxweyne oo Summadeedu JSL/M/XERM/249-4264/092016 tahay ku magacaabay Guddida Sare ee Jaamacadda Hargeysa (Board of Trustees for University of Hargeisa) oo ka kooban 11-xubnood. Sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu dhaqangeliyey oo uu saxeexay wax ka bedelka iyo kaabista ay Jaamacada Hargeysi ku samaysay xeerka Jaamacada.
Markuu Arkay:In baahi loo qabo Magacaabidda Guddida Sare ee Jaamacadda Hargeysa (Board of Trustees for University of Hargeisa);
1. Mudane, Cabdi-samad Cumar Maal Garyaqaanka Guud (Guddoomiyaha Guddida).
2. Nafiisa Yuusuf Aw Muxumed Negaad (Guddoomiye Ku-xigeen Guddida).
3. Abdillaahi Ibraahin Habane Wasiirka Waxbarashada & Tacliinta Sare.
4. Cali Cabdillaahi Daahir Madaxa ICT Commission-ka.
5. Liibaan Ismaaciil Maxamuud Guddida Xuquuqal Iinsaanka.
6. Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Duqa Caasimadda Hargeysa.
7. Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeysa.
8. Maxamed Faarax Xirsi Akaadamiga Nabadda iyo Horumarinta.
9. Cabdirashiid Maxamed Siciid Ganacsatada.
10. Cabdikariin Maxamed Iid Ganacsatada.
11. Suldaan Axmed Daahir Muuse Culimada.
Guddidu waxay xilkooda u gudan doonaan si waafaqsan Shuruucda Dalka iyo Xeerka Jaamacadda Hargeysa.
UN Report: Five million Somalis now food ...